लाभदायक २५ चिजहरू, सपनामा कमलको फूलले भरिएको तलाउ देखेमा के हुन्छ ? - दैनिक नेपाल न्युज
लाभदायक २५ चिजहरू, सपनामा कमलको फूलले भरिएको तलाउ देखेमा के हुन्छ ?
यी २५ चिज सपनामा देख्नु लाभदायक हुन्छ: सपनामा हात्ती देखेमा धन वा पुत्र लाभ हुन्छ । हात्तीमा बसेको देखेमा भूमीमा गाडिएको धन प्राप्त हुनसक्छ । सेतो रंगको हात्ती सपनामा देखेमा कल्याणकारी फल मिल्छ । सेतो सर्पले डसेको देखेमा धनलाभ हुन्छ । माछा देखेमा धेरै शुभ हुन्छ । मछुवारेकहाँ माछा देखेमा धनलाभ हुन्छ । चरा उडिरहेको देखेमा धन लाभ हुन्छ । हाँस देखेमा शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
सिंहमा चढेको देखेमा धन, बल, विर्य र शौर्यको वृद्धि हुन्छ । सपनामा उँट देखेमा अपार धन प्राप्ति हुन्छ । घोडा देखेमा संकट नास हुन्छ । आपत्तीबाट छुटकारा मिल्छ । घोडा चढेको देखेमा ठूलो पद पाईन्छ । प्रमोशन हुन्छ । मोटो गाई वा गोरु देखेमा लाभ मिल्छ । सन्तान प्राप्ति हुन्छ । जरायो देखेमा चिताएको पुग्छ । उत्तम फल मिल्छ । बाख्रा देखेमा उच्च फल प्राप्त हुन्छ ।
जुका वा बिच्छि देखेमा धन, पुत्र वा विजय प्राप्त हुन्छ । घोडी, कुखुरी वा कर्याङकुरुङको पोथी देखेमा राम्री श्रीमती प्राप्त हुन्छ । सूर्य उदाएको देखेमा धन लाभ तथा रोगबाट मुक्ति मिल्छ । सूर्य निलेको देखेमा उत्तम पुत्र प्राप्त हुन्छ । घनघोर वर्षा भएको देखेमा व्यापारमा लाभ हुन्छ । चन्द्रमा उदाएको देखेमा रोगबाट मुक्ति मिल्छ । समुद्र देखे लक्ष्मी प्राप्ति हुन्छ । सेतो फूल देखे धनलाभ हुन्छ । हरियो फूल देखे जनसंपर्क बढ्छ ।
फल देखे धनलाभ हुन्छ । पान देखेमा मुद्दा मामिलामा जीत हुन्छ । पहाडमा चढेको देखे सफलता तथा पहाडको टाकुरामा पुगेको देखेमा आयु वृद्धि हुन्छ । सपनामा नरिवल, केरा वा निबुवा देखेमा सन्तान प्राप्ति हुन्छ । तलाऊ वा पोखरी देखेमा प्रशस्त धन प्राप्ति हुन्छ । स्वच्छ पानी देखेमा मंगल तथा पानीमा पौडिएको देखेमा सुख हुन्छ । कमलको फूलले भरिएको तलाउ देखेमा शुभप्रद, सन्तान प्राप्ति हुन्छ । कपास अरुलाई दिएको देखेमामात्र शुभ फल प्राप्त हुन्छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा एक बिरामीका पेटबाट ३५ किलोको ट्युमर निकालियो